Shabaabul Mujaahidiin OO Ka Hor Tagay Weerar Ay Soo Qaadeen Askar Cadaan Iyo Madow Isugu Jira. – Bogga Calamada.com
Shabaabul Mujaahidiin OO Ka Hor Tagay Weerar Ay Soo Qaadeen Askar Cadaan Iyo Madow Isugu Jira.
November 29, 2016 6:25 am Views: 16
Ciidamo gaallo ah oo watay diyaarado Helicopters ah ayaa xaley markale weerar ku soo qaaday degmada Toratorow ee Wilaayada Sh/hoose, balse ciidamadaas ayaa ku guuldareystay in ay xaqiijiyaan ujeedka weerarkooda ka dib markii ay la kulmeen iska caabin adag.
Ilo wareedyo dhanka mujaahidiinta ah ayaa noo xaqiijiyey in ciidamadan ay diyaaradaha kaga soo dageen duleedka magaalada, ka dibna iyagoo lugeynaya ay u soo jiheysteen dhanka magaalada si ay u beegsadaan xarumaha mujaahidiinta.
Basle waxaa la sheegay in qarax aad u xoogan lagula eegtay afaafka hore ee magaalada, Islamarkaana ay kala firxadeen iyagoo aanan xaqiijin wax ka mid ah ujeedadii weerarkooda.
Saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta ayaa noo sheegay in qaraxa lala eegtay ciidamo lugeynayey oo ka mid ahaa gaalada, islamarkaana uu cadowga gaarsiiyey qasaare kala duwan.
Laakiin waxaan la ogaan Karin qasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca maadama waqtiga uu ahaa xilli habeen ah.
Dad goobjoogeyaal ah oo saaka isugu soo baxay halka uu qaraxu ka dhacay ayaa Idaacadda Islaamiga Andalus u sheegay in ay arkeen dhiig, Faashado iyo qansado rasaas ah oo uu ka cararay cadowga ka dib markii uu qaraxu dhacay.
Ciidamadii gaalada ah ayaa la sheegay in ay kala firxadeen, islamarkaana ay si deg deg ah kaga baxeen deegaanka, waxaana ay u jiheysteen halkii ay ka yimaadeen.
Lama oga waxa ay ahaayeen ciidamadan balse badanaa deegaanada ay mujaahidiintu ka taliyaan ee wilaayada Sh/hoose waxaa soo weerara ciidamo American iyo kuwa Soomaali ah oo inta badan xilliyada habeenkii isku daya in ay arbushaad ka geystaan deegaanada nabdoon ee ay mujaahidiintu ka taliyaan.
Mujaahidiinta ayaa dhowrjeer sidan oo kale u fashiliyey isku dayo dhowr ah oo cadowga uu ku doonayey in uu ku soo weeraro degmooyinka ay mujaahidiintu ka taliyaan ee koonfurta Soomaaliya.
Degmooyinkaas waxaa ka mid ah Toratorow oo dhowrjeer cadowga looga fashiliyey weeraro habeenimo oo uu ku doonayey in uu ku beegsado xarumaha mujaahidiinta.